Maxaad ka Taqaana Dariiqada Timawaynta | Wadamagoo News
Maxaad ka Taqaana Dariiqada Timawaynta
July 27, 2016 - Written by Adan Abdulaahi
Tuulada Qudbigu waxay xarun u tahay dariiqada loo yaqaan Timaweyn ama Rabiiciya oo looga jeedo magaca ninka asaasay oo la yidhaahdo Maxamed Rabiic. Waxay xarumo badan ku leeyihiin meelo badan oo wadanka ka mid ah, waxaana lagu gartaa timaha oo ay la baxaan raggu ka dibna ay labada dhinac u kala rogaan, waxay kaloo qaataan rag iyo dumarba tusbax madow oo aan bul lahayn, dumarkoodana way kala dagaalamaan xijaabka, dadka lama tukadaan haddiise ay kelifto waxay isku dayaan inay iyagu tujiyaan.
Way jiraan qaar aysan waajib ku ahayn inay timaha la baxaan, sida dadka ay u diraan siyaasadda iyo kuwa askarta ah, laakiin waa ku khasbanyahay inuu tusbaxa dariiqada qoorta ku sito.
Dariiqadan taariikh ahaan waxay ku beegnayd asaaskeedu xilligii uu Ingriisku gumaysanayey Somalia, waxaana la sheegaa in ninkan asaasay dariiqadani uu ka faliidhmay dariiqo kale oo weli ka jirta galbeedka Somalia ee hadda loo yaqaan kililka shanaad.
Ninkani dhalasho ahaan uma dhalan Somaliland, wuxuuna kasoo jeedaa beelaha dega galbeedka Somalia.
Dariiqadani sida la wada ogsoonyahay waxay xidhiidh wayn la lahayd dawladdii burburtay ee Siyaad Barre madaxda ka ahaa, waxayna saami ku lahaayeen dhaqaalaha ciidamada qalabka sida, iyaga sidoo kalena basaasiin u ahaa xiligii halkankii dibu xoraynta Somaliland.
Sidoo kale waxay aad isugu taxalujiyaan inay hantiyaan dadka dhaqaalaha ay ku tuhmayaan si ay dhaqaalaha uga faramaroojiyaan xeelad kastaba ha isticmaaleene.
Dariiqadani waxay isticmaashaa farsamooyin badan oo ay dhaqaale ku hesho, qofkii aad ugu fiirsada wuxuu u fahmayaa inay yihiin koox hadafkooda ugu wayni yahay inay dhaqaale uruuriyaan.
Waxaa kamid ah farsamooyinkooda; inay ninba ninkuu ka aftahansanyahay u diraan tolkiis si uu xoolo uga soo uruuriyo, xoolahaas waxaa lagu magacaabaa siyaaro, waxaana lagu soo qaadayaa magaca shiikha, dadka xoolaha laga qaadayo waxaa loogu bushaaraynayaa inay xoolo iyo dadba helayaan, haddii ay ku gacan adaygaana waxaa loogu hanjabayaa inay xoolaha iyo dadkuba ka baaba’ayaan barakada shiikha awgiis. Xeelahada ay wax ku qaataan waxaa ka mid ah inay adeegsadaan sixirka iyo jinniyada, dadka iyaga raacsan ee dhaqaalaha leh ayaa ka muhiimsan kuwa culimada u ah maxaa yeelay iyaga waxbaa laga helayaa, waa u tirsanyihiin meel uu joogaba ninka jeebkiisu qoyanyahay.
Dhaqanka iyo Caqiidada Dariiqada Timaweyn
Waxaa ka mid ah waxyaabaha ay diin ahaan ugu dhaqmaan arimahan:
Wayneynta Shiikhooda Ina Maxamed Rabiic:Waxyaalaha ay aaminsanyihiin oo ay dadka kula murmaan waxaa ka mid ah in Shiikhoodu meel ay joogaanba arkayo, sidoo kalana uu maqlayo waxa ay ku hadlayaan sidaa awgeed waxay si xadka ka baxsan uga baqaan shiikha inay soo hadal qaadaan.
Jimce iyo jamaaco midna ma tukadaan:waxaa la yaab leh in meelaha ay xarumaha ku leeyihiin aysan masaajidba lahayn, waxay leeyihiin meelo waaweyn oo ay ku qaadaan xadrada qaadkana ku cunaan, salaadana mid ba mar buu iska tukadaa, sidoo kale lama arag timawayn jimce tukanaya, inay tukadaan iska daaye dadka ayayba kala dagaalamaan inay tukadaan.
Xajka oo ay la dagaalamaan:waxay iyagu sheegtaan in xajkii bidco qabsatay oo aysan banaanayn in la aado, laakiin waxaa cad in dadka iyaga taabacsan ay kala dagaalamaan inay xajka aadaan.
Sakada oo aysan bixin:xoolaha ay dadka ka qaadaan aad bay u badan yihiin, xoolahaas geel, adhi iyo lo’ba leh oo gaadhaya kumanyaal waxay ka aaminsanyihiin inaysan sako ku waajibin maadaama ay dariiqadu leedahay, sidoo kale dadka xoolaha ay ka qaadaan waa siyaaro ee sako maaha.
Adeegsiga sixirka iyo falka:waana ta ugu badan ee ay dadka ugu hanjabaan, dad badanina kaga baqaan, waxay sixirka ugu adeegaan dadka madaxda ah ee ay markaa la socdaan.
La dagaalanka faafista tawxiidka, cilmiga, wanaaga iyo barashada quraanka iwm.
Cunista qaadkaiyo faafintiisa.
La dagaalanka xishoodka iyo dhowrsoonaanta:Haddii aad meel ay ku badanyihiin tagto oo aad dumarka gacan qaadi waydid waxaa laguu qaadanayaa inaad bidco tahay.
Yaqiinta:Waxay aaminsanyihiin in qof ka shiikha aad daacad ugu noqda uu gaadhayo darajada yaqiinta, taasoo cibaadada oo dhan laga dul qaadayo markuu gaadho yaqiinta.
Khilaafka umadda:Had iyo goor waxay khilaafaan umadda sida aragtida bisha soon, maalmaha ciidaha iwm.
Faafinta jahliga:dariiqada dadka ka sheqeeya waxay badankoodu raacaan xoolaha shiikha, waana dad lagu shaqaysto oo adeega shiikha iyo reerkiisa oo dhan.
Guurka oo la xadido:Dadka dariiqada ka tirsani xoriyadooda uma guursan karaan ilaa loo fasaxo.